Otutu ụlọ ọrụ ndị m maara merụrụ ahụ site na mgbanwe algorithm aha ya panda. A na-elekwasị anya Panda na ezubere iche ala ubi ma nwere metụtara ọtụtụ ụlọ ọrụ. Otu enyi m kwesịrị ịchụ onye ọrụ mbụ ya n'ọrụ n'ihi nfu ha dara n'ọkwa na ọrụ ndekọ aha ndị ọkachamara nke dugara n'ọkwá ahụ ihe dị ka afọ iri. Taa, anyị kwụsịrị mmekọrịta anyị na otu n'ime ndị ahịa kachasị amasị anyị. A ga-emezigharị nnukwu mbibi ha na ịnweta mgbasa ozi (anyị ga-anọgide na-akwado ha ebe ọ bụ na enweghị m obi abụọ na okporo ụzọ ha ga-alaghachi).
M zutere na ahịa taa na ụlọ bụ Ichi sober. Ha na-enwe nrụgide dị ukwuu iji nọgide na-eto ego, yabụ ndọghachi azụ dị ka nke a bụ nnukwu. Luckily, ha ngwaahịa bụ nnọọ na-ekere òkè, otú ahụ ka m na-atụ aro ka ha lelee anya gamification na-ha ravenous Fans na ike ikuku ebe ha na-nọgidere na-utịp na ghọtara maka tinye n'ọrụ ọrụ ha na-enye.
Mee akụkụ ndị ọzọ nke SEO n'enweghị ntụpọ - gụnyere robots.txt, sitemaps.xml, pinging, iwu peeji, wdg. Kwụsị ime ngọpụ ma mezie saịtị gị. Idozi ogo, nnochite anya, ọsọ… ihe niile gbasara ya.
Ugbo ala abughi ihe ojoo (Google ka hu Wikipedia). Na-agba ọsọ na saịtị nke na-erite uru na engines ọchụchọ ma na-enye ọtụtụ nnukwu, ọdịnaya dị mkpa abụghị ihe ọjọọ. Ndị ahịa na-enwe ekele maka ọdịnaya dị mma (ọbụlagodi na Panda leghaara ya anya). Rungba ọsọ na-enwe ihe isi ike siri ike kemgbe Panda, n'agbanyeghị, n'ihi na ugbu a olu nke ụlọ ị na-emepụta na-eche ọtụtụ echiche na-adịghị mma na ihe ị na-achọ inweta.